ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: ABSDF -ကျောင်းသူရဲမေဟောင်း နန်းအောင်ထွေးကြည်ရဲ့ မြောက်ပိုင်း ခရီး(၄)
ABSDF -ကျောင်းသူရဲမေဟောင်း နန်းအောင်ထွေးကြည်ရဲ့ မြောက်ပိုင်း ခရီး(၄)
by May Thingyan Hein on Friday, November 9, 2012 at 8:05pm ·
နိုဝင်ဘာ ၁၀ ၊ ၂၀၁၂၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဦးစီးလွှမ်းမိုးက ထွန်းနွယ်အောင်ကိုဖမ်းထားတဲ့အချိန်က အမှတ်စဉ် ၅ သင်တန်းကာလလား သင်တန်းပြီးကာစလား သိပ်မမှတ်မိတော့ဘူး။ ထွန်းနွယ်အောင်မသေခင် ထွန်းနွယ်အောင်ကို ဖမ်းချုပ်ထားတဲ့ ကာလမှာဘဲ ABSDF ၇၀၁ ရဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံကို ပြောင်းဖို့ လုပ်ကြတယ်။
အဲဒီထဲမှာ ကိုရဲ(ရဲလင်း) တို့ပါတယ်။ ညီညီကျော်၊လေးစိန်(ဦးစိန်)၊သန်းထွန်းစိုးတို့လည်း ပါတယ်။
အဲလို ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းဖို့ကိစ္စတွေလုပ်နေကြပြီ ဆိုတော့ အဲ့ဒါ ၁၉၈၉ နိုဝင်္ဘာ - ဒီဇင်ဘာ လောက်ဖြစ်နေပြီ ။
အဲ့ဒီကာလတွေမှာ ကျမတို့ ABSDF ( ၇၀၁) ဗဟို လိုင်စင်မှာ ပြသနာတွေ အဖြစ်အပျက်တွေက ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာဘဲ ။
အဲဒီနောက်မှာ ထွန်းနွယ်အောင်က သေတာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာက ကျမက ဦးစီးလွှမ်းမိုးရဲ့ ရုံးမှာ အလုပ်လုပ်တယ်။ ထွန်းနွယ်အောင်သေပြီး တော်တော်များများ ရှေ့တန်းထွက်ကုန်ကြတယ် ။ ထွန်းနွယ်အောင်သေ တော့မျိုးဝင်းတော်တော် ဒေါကန်တာ ။သူ့လူ သူသိပ်အားကိုးတဲ့လူလေ ။
တကယ်တော့ ကျမက ဦးစီးလွှမ်းမိုးနဲ့ ရင်းနှီးတာတော့မရှိဘူး။ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ အနေအထားကလည်း သူက ကိုယ့်ရဲ့ အထက်လူကြီး ဆိုတော့ သူခိုင်းတာ လုပ်ရတဲ့ ရဲမေ ပဲလေ။
သူ့အကြောင်းလည်း ကိုယ်က မသိပါဘူး။ သူက အရပ်မြင့်မြင့် ပိန်ပိန်ပါးပါးပါပဲ။ ကျမထက်တော့ အသက်ကြီးပုံရတယ်။ ဘယ်ကလာလဲ အသက်ဘယ်လောက်ကြီးသလဲ ဆိုတာမျိုးတွေလည်း အတိအကျ မသိဘူး။နောက်ပြီးတော့ ကျမတို့လိုင်စင်ကို ရောက်တဲ့ အချိန်တုန်းကလည်း ဦးစီးလွှမ်းမိုးက ရှေ့တန်းကိုရောက်နေတာ ။
အပတ်စဉ် ၅ သင်တန်းအချိန်မှာမှ ဦးစီးလွှမ်းမိုး လိုင်စင်ကို ပြန်ရောက်လာတာ။ နောက် သူ့ရုံးမှာ အလုပ်လုပ်ပေးရတယ်။ ဒါလောက်ပဲ ရှိတယ်။တခါတလေ အမှတ်စဉ် ၅ သင်တန်းသားတွေကတော့ ဦးစီးလွှမ်းမိုးဆီကို သွားသွားပြီး ဆေးလိပ်တောင်းသောက်တာမျိုးတွေ ဘာတွေ ရှိတယ်လို့တော့ ကြားရဖူးတယ်။ ဂွင်ဖန်ကြတာပေါ့ ။
နောက်တော့ ၁၉၉ဝ ခုနှစ် မတ်လ မှာပေါ့ ။
တရက်ကြတော့ ကျမက ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ဦးစီးလွှမ်းမိုးရုံးမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ သွားတော့ ဦးစီးလွမ်းမိုးရုံးမှာသန်းဇော်တို့၊ ဇော်ဇော်မင်းတို့ကို တွေ့လိုက်တယ်။ ဇော်ဇော်မင်းက ဦးစီးလွှမ်းမိုးရဲ့ ရုံးခန်းထဲမှာ ရောက်နေတယ်။ ဦးစီးရဲ့ File တွေကိုကြည့်နေကြတာ ။
အဲလိုလုပ်နေကြတာ တွေ့လိုက်တော့ ကျမက အံ့သြသွားတယ်။ ထူးခြားနေတာကိုး အဲဒီမှာ ဇော်ဇော်မင်းက ကျမကို တချက်ကြည့်ပြီး ပြောတယ် နင်အလုပ်ကို လာစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့…။ ကျမလည်း စိတ်ထဲ တမျိုးဖြစ်သွားတယ်၊ အေး လာစရာမလိုတော့လည်း ပြီးရော ဆိုပြီး အဆောင်ပြန်လာလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ တရက် နှစ်ရက်အတွင်းမှာ ဦးစီးလွှမ်းမိုးကို မတွေ့ရဘဲနဲ့ ပျောက်နေတာ သတိထားမိတယ်။
ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ ဦးစီးလွှမ်းမိုး ပျောက်နေတာကိုတော့ သတိထားမိပေမဲ့ သူအရင်ကလည်းရှေ့တန်းထွက်နေကြပဲဆိုတော့ဘာမှလဲစိတ်ထဲမှာတော့သိပ်မရှိဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုရဲတို့ ဘာတို့လည်း တပ်ထဲမှာ မရှိတော့ဘူး ။ ရှေ့တန်းထွက်ကုန်ကြပြီ၊ တော်တော်များများပဲ ရှေ့တန်းတွေရောက်ကုန်ကြပြီ ဆိုတော့ ကျမတို့နောက်တန်း ဗဟိုမှာလူနည်းသွားပြီ။
တကယ်တော့ ကျောင်းသားတပ်မတော် ဆိုတာမှာ ကျောင်းသားတွေချည်းပဲ ရှိတာ မဟုတ်ဘူး။ လယ်သမားတွေလည်း ရှိတယ်။ ကျောင်းပညာ ၄ တန်းလောက်တက်ထားပေမဲ့ တပ်ခွဲမှူး ရာထူးပေးပြီး ခန့်ထားတာတွေလည်း ရှိတယ်။ အသက်ကြီးကြီးတွေရှိတယ်။ ပညာမတတ်တဲ့ သူတွေရှိတယ်။ ပြောရရင်တော့ အောက်ခြေလူတန်းစားတွေရော အကုန်ပါတယ်ပေါ့နော်။
အဲဒီအချိန် ၁၉၉၀၊ မတ်လပိုင်း တရက်ကျတော့မှ ရဲဘော်လေးတယောက်က လာခေါ်တယ်မငယ်ကိုVcsကတွေ့ချင်တယ်တဲ့..အဲလိုပြောပြီးလာခေါ်တယ်။
ကျမတို့ကလည်း ကိုယ့်ကို လူကြီးတွေဘာတွေက တွေ့ချင်တယ်ဆိုရင် ယူနီဖောင်းတွေဘာတွေ ပြည့်ပြည့်စုံစုံဝတ်ရတယ်လေ၊ အဲတော့ကျမလည်း ယူနီဖောင်းတွေဘာတွေ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဝတ်ပြီး သူ့ရဲ့ တဲထဲကို သွားတယ်။
သွားလိုက်တဲ့ အခါကျတော့ ဦးစီးလွှမ်းမိုးကို အဲဒီမှာ ဖမ်းထားတာ။ ဖမ်းထားတဲ့အပြင်ကို နှိပ်စက်ထားတာ။ မျက်နှာတွေကလည်း ဖူးယောင်နေတယ်။ ကျမမြင်လိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဦးစီးလွှမ်းမိုးက လက်နောက်ပြန်ကြိုးတုပ်ထားတဲ့ အနေအထားနဲ့ပဲ ငုတ်တုတ်ကလေး ထိုင်နေတယ်။ အဲဒီအခြေအနေမှာ သူတို့က သန်းထွန်းစိုးကိုပါ ဖမ်းထားပြီ။
ကျမ ရောက်သွားတော့ မျိုးဝင်းက တချက်ကြည့်ပြီး မင်းထိုင်လို့ ပြောတယ်။ ကျမကလည်း သတိ စွဲထားတဲ့ အနေအထားနဲ့ပဲ ထိုင်ရတယ်။ သတိ ကတော့ စွဲထားရတာပဲ။
အဲလို ကျမလည်း ထိုင်လိုက်ရော ဦးစီးလွှမ်းမိုးကလည်း ကျမကို လှမ်းအကြည့်မှာ မျိုးဝင်းက သူ့လက်ထဲက သေနပ်နဲ့ ဦးစီးလွှမ်းမိုးရဲ့ မျက်နှာကို ဖြတ်ရိုက်ချလိုက်တယ်။ သေနပ်ဒင်နဲ့ မျက်နှာကို ရိုက်ချလိုက်တာနော်။ အဲဒါကို မြင်လိုက်ရတော့ လန့်သွားတယ်။
ပြီးတော့ ချက်ခြင်းပဲ အဲဒီ သေနပ်နဲ့ ကျမဘက် လှည့်ပြီး နားထင်ကို ချိန်လိုက်တယ်။ ချိန်လိုက်တော့ ကျမလည်း အဲ….ဆိုပြီးတော့ ပိုပြီးလန့်သွားတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းတောင် မသိဘူး၊ အခြေအနေကိုလည်း နားမလည်ဘူးသတိစွဲထားရင်းနဲ့ကိုလန့်ဖျန့်သွားတာ။
သေနပ်နဲ့နားထင်ကို တေ့ပြီးတော့ကို ချိန်တာ ကျမလည်း ကြောက်တာပေါ့ သေနပ်ထဲမှာလည်း ကျည်က အပြည့်ပြီးတော့ ရှေ့မှာလည်း ဦးစီးလွှမ်းမိုးမျက်နှာကို ဖြတ်ရိုက်ထားတာကိုလည်း မြင်ထားရတယ်ဆိုတော့ လန့်တယ်။ အဲလို သေနပ်နဲ့ ခေါင်းကို တေ့ပြီးတော့မှ မျိုးဝင်းက မေးတယ်။
`မင်းကို ဘာတွေ ခိုင်းလဲ` လို့ မေးတယ်။ ကျမကို အဲလိုမေးတော့ လန့်နေတဲ့ကြားကပဲ ဖြေရတယ်။
`ကျမကို ခိုင်းတာကတော့ စာတွေရှိတယ်။ ခိုင်းတာတွေကို ဖိုင်တွေထဲမှာ စာတွေရေးထားတယ် အဲဒါကို သွားကြည့်လိုက်ပါ `လို့ အဲလို ဖြေလိုက်တော့။
အဲလိုဖြေလိုက်တော့ သံချောင်းကနေ ဟာ မလုပ်နဲ့ မလုပ်နဲ့… မငယ် မင်း ပြန်တော့လို့ဝင်ပြောတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အခန်းထဲမှာ မျိုးဝင်းနဲ့ အတူ သံချောင်းလည်း ရှိနေတယ်။ သူက မျိုးဝင်းကို အဲလိုပြောပြီး ကျမကို ပြန်ခိုင်းတာ။
အလေးပြုပြီးတော့မှ ပြန်လာတယ်။ ပြန်လာတော့ စိတ်ထဲ တော်တော်လေး လေးနေတယ်။ စဉ်းစားစရာတွေလည်း ရှိသွားပြီ။ နောက်ပိုင်းမှ ပြန်သိရတာကတော့ အဲဒီနေ့ကတည်းက မျိုးဝင်းက ကျမကို ဖမ်းဖို့ သန်းထွန်းစိုးတို့နဲ့အတူ ကျမကိုလည်း ဖမ်းဖို့ မျိုးဝင်းက စီစဉ်နေခဲ့တာ တဲ့။
ဒါပေမဲ့ ဘာကြောင့်မှန်းတော့ မသိဘူး အဲဒီမှာ သံချောင်းက ၀င်တားလိုက်တယ် ကျမကို မဖမ်းဖြစ်ဘူး။ မသတ်ဖြစ်ဘူး။
အဆောင်ကို ပြန်ရောက်တော့လည်းစဉ်းစားနေတယ်။ သန်းထွန်းစိုးကိုလည်း ခေါ်ထားတယ်၊ ပြီးတော့ ဦးစီးလွှမ်းမိုးကိုလည်း ဖမ်းထားတယ်။ ဘာကြောင့် ဖမ်းထားတယ်ဆိုတာလည်း မသိရဘူး။ သူတို့က လူတယောက်ကို ဖမ်းချင်တဲ့ အချိန်မှာ ဖမ်းတယ်၊ ဘာကြောင့်ဖမ်းတယ်ဆိုတာလည်း သိခွင့်လည်း မပေးဘူး။ စိတ်ထဲမှာလည်း ထင့်နေတယ်။ လေးလေးပင်ပင်တွေ ဖြစ်နေတယ်။ နေလို့မကောင်းတော့ဘူး။ ဘာဖြစ်နေကြပြီလဲ ဆိုတဲ့ စိတ်လည်း ရှိပြီ။ ကျမ စိတ်ထဲမှာတော့ စဉ်းစားစရာတွေရှိသွားပြီ။
ပြီးတော့ အဲဒီကိစ္စကို ကျမက ရဲမေထဲက တယောက် .. စိုးစိုးလွင်ကို ပြောတယ်။ ပြောတော့ စိုးစိုးလွင်က ဘာပြောလဲ ဆိုတော့ ဟာ… မငယ် ကျနော့်ကို လာမပြောနဲ့ ကျနော် မပြောနဲ့ မငယ် ကျနော် မသိချင်ဘူး မသိချင်ဘူး ဘာမှ မသိချင်ဘူး လို့ ပဲပြောတယ်။ သူက အရမ်း အရမ်းကြောက်တတ်တယ်။ အဲလို ပြဿနာ တခုခုကို ပြောလိုက်တိုင်း ကျနော် မသိချင်ဘူး ကျနော် မသိချင်ဘူး ဆိုတာပဲ ပြောတယ်။ သူ က အဲလို ပြောလိုက်တော့ ကျမလည်း ဘယ်သူမှ မပြောတတ်ဘူး။ ရဲမေ အငယ်ပိုင်းကလေးတွေကိုတော့ ကျမ မပြောချင်ဘူး မပြောဘူး။
အဲဒါနဲ့ နောက် သိပ်မကြာဘူး သုံးလေးရက်လောက်ပဲ ထင်တယ်။ ခရာတွေဘာတွေ မှုတ်ပြီး တန်းစီခိုင်းတယ်။ တန်းစီတဲ့အခါမှာလည်း တန်းစီပုံ တန်းစီနည်းက အလံတိုင် ကုန်းကို မျက်နှာမူပြီးတော့ တန်းစီရတယ်။ အဲဒါက ပုံမှန်စီရတာပဲ။
အဲဒီနေ့ကျတော့ ကျမတို့ကို အလံကို မျက်နှာမူပြီးတော့ တန်းစီခိုင်းပြီးတော့ အနောက်ကို လှည့်ခိုင်းတယ်။ အနောက်ကို လှည့်လိုက်တော့ ကျမတို့က အလံတိုင်ကို ကျောပေးပြီး လူကြီးတွေ နေတဲ့ ကုန်းကို မျက်နှာမူလိုက်ရတယ်။ အဲဒီမှာ ဘာမြင်သလဲဆိုတော့ မျိုးဝင်းတို့ သံချောင်းတို့က ဦးစီးလွှမ်းမိုးကို ခေါ်ပြီး ဆင်းလာတယ်။ ဦးစီးလွှမ်းမိုးက လက်နောက်ပြန်ကြိုးတုတ်လျက်နဲ့ပဲ။
ပြီးတော့ ကျမတို့တန်းစီနေတဲ့ ရှေ့တည့်တည့်မှာ ဦးစီးလွှမ်းမိုးကို လက်နောက်ပြန် ကြိုးတုတ်လျက်ပဲ ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်။ အဲလိုပဲ တဘက်ကနေ သန်းထွန်းစိုးကိုလည်း အဲလိုအနေအထားနဲ့ပဲ ခေါ်ချလာတယ်။အဲဒါတွေကိုလည်း ကျမတို့က မြင်နေရတယ်။ တန်းစီတဲ့ အနေအထားလည်းဖြစ်တော့ ဘာမှလည်း လုပ်လို့မရဘူး။ ဒီအတိုင်းပဲ ကြည့်နေရတယ်။ သူတို့ ဒီလူ ၂ဦးကို ခေါ်ပြီး ဘာလုပ်မယ်မှန်းလဲ မသိဘူး။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ သံချောင်းတို့က မေးတယ်။ ဘာတွေမေးသလဲဆိုတာတော့ ကျမနေရာကနေ မကြားရဘူး။ ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာ ဦးစီးလွှမ်းမိုးရဲ့ အသံကို ကြားလိုက်ရတယ်။အဲဒါဘာလဲဆိုတော့။ ဦးစီးလွှမ်းမိုးက ပြောတယ်။
`ကျနော် မ.ဆ.လ တော့မဖြစ်ပါရစေနဲ့…ဗကပ ပဲ ဖြစ်ပါရစေ.. ဗျာ…`
ကဲ…အဲလိုဖြေတဲ့ အသံကြားလိုက်တယ်။ အဲလိုအဖြေကြားတော့ သံချောင်းက ဒေါသတွေ ထွက်တယ်။ သူတို့လိုချင်တာက ကျနော် ထောက်လှမ်းရေးပါဆိုတဲ့ အဖြေကို လိုချင်ပုံရတယ်လို့ ကျမ ထင်တယ်။ အဲဒီမှာ ဦးစီးလွှမ်းမိုးက ဗကပ ဘဲ ဖြစ်ပါရစေလို့ဖြေလိုက်တော့ ဒေါပွပြီး နောက်ဆုံး သတ်ပစ်လိုက်တာပဲ။ သေနပ်နဲ့ပစ်တာ တချက်လား နှစ်ချက်လား မသိတော့ဘူး။
ကျမတို့ တွေရပ်နေတဲ့ ရှေ့မှာဘဲ..အဲ့ဒါ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ကွင်းလို့လည်း ပြောလို့ရတယ်၊ တပ် ခလယ်မှာပဲ သံချောင်းက ပစ်သတ်လိုက်တာ။ ဦးစီးလွှမ်းမိုး လဲကျသွားတယ်။အရမ်းလန့်သွားတယ်။ ဟာ… သွားပြီ… သန်းထွန်းစိုးကိုလည်း သတ်ပြီ ဆိုပြီးတော့လည်း ပိုကြောက်သွားတယ်။
ကျောင်းသားရဲဘော် ရဲမေတို့အားလုံး တန်းစီထားတဲ့ရှေ့တည့်တည့်မှာ ပစ်သတ်လိုက်တာကို မြင်လိုက်ရတော့ အားလုံးပဲ လန့်ကုန်ကြတယ်။ ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာကွာ။ တသက်နဲ့ တကိုယ်မှာကိုယ့်ရဲ့ မျက်စိရှေ့မှာ အဲဒီလို သွေးအေးအေးနဲ့ သတ်ပစ်လိုက်တာမျိုးလည်း မကြုံဘူးတော့ ဘယ်လိုမှန်းမသိဘူး ဖြစ်သွားတာ။
အဲဒီမှာ သန်းထွန်းစိုးကလည်း ငုတ်တုတ်ကလေး။ သူ့ကိုတောင် မကြည့်ရက်တော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီမှာ သန်းထွန်းစိုးကို မသတ်ဘဲနဲ့ ပြန်ခေါ်သွားကြတယ်။ ဖမ်းထားတဲ့ အနေအထားအတိုင်းပဲ အဲဒီအတိုင်း ပြန်ခေါ်သွားတာ။
အဲဒီမှာ ဦးစီးလွှမ်းမိုးကို သတ်ပစ်လိုက်ပြီးတော့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ရက်စက်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ကြသေးတယ်။အဲဒါကတော့ ဦးစီးလွှမ်းမိုးရဲ့ အလောင်းကို ကျင်းတူးပြီးအဲဒီနေရာမှာပဲမြှုပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ကျမတို့ကို တန်းမဖြုတ်ခိုင်းသေးပဲနဲ့ ရှေ့ထွက် ညာထွက် ဘယ်လှည့်တွေဘာတွေ လုပ်ခိုင်းပြီးတော့မှ နောက်ဆုံးဦးစီးလွှမ်းမိုးကို မြှုပ်ထားတဲ့ မြေပုံပေါ်ကို လမ်းလျှောက်ခိုင်းတာ။
…ဆိုတော့… ဘယ်သူက လုပ်ရက်မှာလဲ။ ….ကျမ …. မလုပ်ရက်ဘူး။ ဘယ်သူမှလည်း လုပ်ရက်မယ် မထင်ဘူး။
ခုလေးတင်ကွာ ကိုယ့်အရှေ့မှာလူတယောက်ကို သတ်ပစ်လိုက်ပြီးတော့ ဒီလူရဲ့ မြေပုံပေါ်ကို လမ်းလျှောက်ခိုင်းတာ။ တော်တော်လေးကို မဟုတ်ဘူး အဲဒီ စိတ်ဓါတ်တွေက။မဟုတ်တော့ဘူး။
အဲဒီအချိန်မှာတော့ တခုပြောချင်တာက စစ်တပ်မှာ ချီတက်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ရှေ့ဆုံးကလူရဲ့ နောက်ကနေ နောက်ကလူတွေက လိုက်ရတယ်။ အဲဒါကို ရဲဘော်ရဲမေတိုင်း သိတယ်။
ကျမ အလှည့်ရောက်တဲ့အခါကြတော့ ကျမက မြေပုံတည့်တည့်ကြီးပေါ်ကနေ ဖြတ်နင်းမလျှောက်ဘဲနဲ့ မြေပုံဘေးနေရာကိုပဲနဲနဲလေး ကွေ့ချပြီး လျှောက်လိုက်တာ။
အဲဒီလိုလုပ်လိုက်တော့ မြေပုံပေါ်ကနေ မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နဲနဲပေါ့ ။ မြေပုံဘေးကဖြစ်သွားတယ်။
ကျမ ကနဲနဲစောင်းလိုက်တော့ နောက်ကလူတွေကလည်းအကုန်လိုက်ကွေ့လျှောက်ကြရတယ်။ အဲဒါတွေကက မျိုးဝင်းတို့က သေချာ ကြည့်ထားတယ်။
ကျမကတော့ မသိဘူး။ ကျမက ဒီလို မတက်နင်းချင်လို့ လုပ်လိုက်တာပဲ။ စိတ်တွေလည်း မကောင်းကြတော့ဘူး။တန်းဖြုတ်ပြီး ရဲမေဆောင်ကို ပြန်လာကြတယ်။ အဲဒီမှာ စိုးစိုးလွင်တို့ရောပေါ့။ အီးတီ ၊နန်းစော၊သင်းသင်းညီတို့ဆို အသက်တွေက ၁၅ - ၁၆ နှစ်လေးတွေလောက်ပဲ ရှိဦးမယ်။ သူတို့တွေလည်း မျက်နှာလေးတွေလည်း မကောင်းဘူး စိတ်တွေလည်း မကောင်းကြဘူး။
နောက်တော့ ဧပြီလလောက်မှာ KIAက သင်္ကြန်ပွဲလိုမျိုးလုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ သူတို့ သန်းထွန်းစိုးကို လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။
ပြန်လွှတ်ပေးပြီးတော့မှ သန်းထွန်းစိုးက ကျမကို ပြောတာက…။ … သူ့ကို ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေ နှုတ်ထွက်ခိုင်းတယ်တဲ့…။ ABSDF - NB ဖြစ်မြောက်ရေး ရွေးကောက်ပွဲပေါ့လေ။ သန်းထွန်းစိုးကလည်း သူ နှုတ်ထွက်ပေးလိုက်တယ်တဲ့။ နောက် သန်းထွန်းစိုးက သူ ဘာကြောင့် အဖမ်းခံရတာလဲ ဆိုတာကိုတော့ မပြောဘူး။ သူက ကျမကို သတိပေးတယ်။
သူက ထူးထူးခြားခြားပဲ…ပြောတာက။ နင်နဲ့ မိချို( မခင်ချိုဦး) နဲ့ ပြန်တော့တဲ့…။ အဲလို ပြောတာ။
အဲလိုပြောတော့ ကျမကလည်း ဟာ …ဘာလို့ ပြန်ရမှာလဲ၊ ငါက တော်လှန်ရေးလုပ်ဖို့ လာတာ မပြန်နိုင်ပါဘူး လို့ သူ့ကို ခံပြီး ငြင်းတယ်၊ သူ့ကို ပြန်ပြောတယ်။ နောက်တော့ မိချိုကလည်း ကျမကို ငေးကြည့်နေတော့ မိချို နင်ပြန်ချင်ပြန် နော်၊ ငါကတော့ မပြန်ဘူးလို့ သူ့ကို အပြတ်ပြောခဲ့တယ်။
အဲတော့ မိချိုကလည်း ကျမကို ပြန်ကြည့်ပြီး ပြောတယ်.`အမမှ မပြန်တာ ကျမလည်း မပြန်တော့ဘူး`တဲ့… သူက အဲလိုပြောရှာတယ်။ ကျမ မပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့် မိချို မပြန်ဘူး၊ မိချို မပြန်တဲ့အတွက် ကျန်တဲ့ ယောင်္ကျားလေး ၃ယောက်ကလည်း မပြန်ကြတော့ဘူး။
အဲဒါကို ခုချိန်မှာ ကျမ ခံစားနေရတယ်။ အဲဒီတုန်းကများ ကျမက သန်းထွန်းစိုး သတိပေးတဲ့အချိန်တုန်းကသာ ထွက်ပြေးဖြစ်ခဲ့ရင် ပြန်ဖြစ်ခဲ့ရင်….မိချို အပါအ၀င် သူတို့ အသက်ရှင်ကြမယ်။ ကျမက မပြန်ဘူးလို့ ငြင်းလိုက်တော့ သူတို့ အကုန်လုံးကလည်း ကျမနဲ့ အတူတူပဲ နေကြမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ နေခဲ့ကြတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူတို့လည်း အသတ်ခံခဲ့ရတယ် လို့ စိတ်ထိခိုက်တယ်။ အဲဒါက စိတ်ထဲမှာ တော်တော်စွဲသွားတာ။ အဲဒီအကြောင်း စဉ်းစားရင် မျက်ရည်ကျတယ်။ အဲဒါကြီးက စိတ်ကို ထိခိုက်စေတာ….ဒီနေ့ အထိပဲ။
68Unlike · · Share
You, Ko Lin Wai Aung, Nang Aung Htwe Kyi, ကိုဝိုင် ဝိုင်ကေ and 52 others like this.
Immortal Roulette !-!
November 9, 2012 at 8:27pm · Like
ဘရာဇီး ငှက်ရိုး ပုံလေးတွေ သပ်သပ် တင်ပေးရင်ပိုကောင်းတယ်ခင်ဗျာ...
November 9, 2012 at 8:34pm · Like
KO MG MG အပိုင်း ၅ ကိုမျော်လျက်ပါ
November 9, 2012 at 8:39pm via mobile · Like
Ni Larေ၇ှ့ကိုဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာဘယ်သူကမှတိတိကျကျမသိနိုင်တာ....
November 9, 2012 at 9:33pm · Like · 1
Nang Aung Htwe Kyi စာဖတ်သူတွေ ကို တကယ့်အခြေအနေအတိုင်း ပြောပြနေရတာ .. အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်ဆို ရင်တောင်းပန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့အနေနဲ့ ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ အဖြစ်မှန်ကို ဖွင့်ပြောနေရတာဖြစ်ပါတယ် ။ အားလုံးပြီးရင်သုံးသပ်ကြပါ.။ ဒါ တွေဟာ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဟာ ABSDF-NB မြောက်ပိုင်း ( ကချ...See More
November 9, 2012 at 9:39pm · Like · 31
Ko Lin Wai Aung ခွဲမှူး ကိုထွန်းနွယ်အောင်(ဦးငါး)ကိုဖမ်းတာ ကျနော်တို့ကော်မရှင်လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာဆိုတော့ အပတ်စဉ်၅ပြီးမှ ဆိုတာသေချာပါတယ်...ရှေ့တန်းတွေ မဲသွားမယူခင် ဖြစ်ဘို့များပါတယ်...အပတ်စဉ်၅သင်းတန်းကလဲ၁၉၉၀ ဇန္န၀ါရီ မှာဆင်းပါတယ်....
November 9, 2012 at 9:47pm · Edited · Like · 2
Marlu San ကြည့်ရတာ မျိုးဝင်းက ငယ်ငယ်က ကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့ စစ်ကားတွေ သူပုန်ကားတွေကို သဘောကျ အတုယူပြီး အဲသည် လူဆိုးဗိုလ်တွေ လုပ်သလို လိုက်လုပ်ချင်ပုံရတယ်။ နောက်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အညှိုးထားပြီး ဖမ်းတာ၊ နှိပ်စက်၊ သတ်ဖြတ်ခဲ့တာများလား။
November 9, 2012 at 9:44pm · Edited · Like · 3
Nang Aung Htwe Kyi ကျေးဇူးကိုရဲ .. အဲ့ဒီ တိုတောင်းတဲ့ အချိန်ကာလလေးမှာ အားလုံးပြုံဖြစ်နေတာ ။ ဥိးစီးလွှမ်းမိုးကိုသတ်တဲ့အချိန် ၁၉၉၀ ခုနှစ် ဧပြီ လဆိုတော့ အပတ်စဉ် ၆ သင်တန်း ကနောင်ရာပါမှာ စဖွင့် နေပြီထင်တယ် ။သူတို့ သင်တန်းပြီးတာ မေလ ဆိုတော့ ။
November 9, 2012 at 9:45pm · Like
Ko Lin Wai Aung ကျနော်တို့ မဲသွားယူဘို့ ရင်း၅ ဘက်ဆင်းတော့ အပတ်စဉ်၆ ကနောင်ရာပါမှာ စနေပြီ...ကိုစိုးလင်းတို့ အောင်နိုင်တို့...ကိုထွန်းအောင်ကျော်တို့ သင်တန်းပြန်တက်နေကြပြီ...မဲယူပြီးနောင်ရာပါပြန်ရောက်တော့ ကိုလွှမ်းမိုး သတ်ထားပြီဆိုတာကြားတယ်...ကိုအောင်ကျော်ကိုပါခေါ်ထားလို့ဆိုပြီး ကိုအောင်ကျော်ပါ ရှေ့တန်းကပြန်ပါလာတယ်....
November 9, 2012 at 9:54pm · Like · 4
Nang Aung Htwe Kyi ဟုတ်တယ်ကိုရဲ .. ဦးစီးလွှမ်းမိုးပြီးတော့ ကိုအောင်ကျော် ပါဘဲလေ ..
November 9, 2012 at 10:02pm · Like
Marlu San ကိုလွှမ်းမိုးကို သတ်ပြီး မြုတ်ထားတဲ့ မြေပုံကိုပါ လူတွေ ဖြတ်နင်းခိုင်းတယ် ဆိုတာ အညှိုးနဲ့ လုပ်တာ သေချာတယ်။ ထွန်းနွယ်အောင်ကိစ္စကြောင့် လုပ်တာ။ တခြားလူတွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဖမ်း၊ နှိပ်စက်၊ သတ်တာမှာ ဘာထောက်လှမ်းရေးမှ မဟုတ်ပဲ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ရန်ညှိုးပဲ။ မျိုးဝင်းရဲ့ သည်လို သေးသိမ်တဲ့ စိတ်ထားနဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို လက်ခံ အားပေးခဲ့တဲ့ ဆေးကျောင်းသားကြီး အောင်နိုင်၊ စဉ်းစားဆင်ခြင်ဥာဏ်နည်းမှုကို ရှက်တတ်ရင် လဲသေဘို့ ကောင်းတယ်။
November 9, 2012 at 10:18pm · Edited · Like · 7
Nang Aung Htwe Kyi အပေါ်က အောက်ဆုံးကဓါတ်ပုံ ကျောက် တုံး တွေ တန်းဆီနေတဲ့ နေရာ တဝှိုက်မှာပေါ့ .။ ဦးစီးလွှမ်းမိုး ကို ပြစ်သတ်ပြီး မြူပ်တာ ။
November 9, 2012 at 10:42pm · Like · 2
Ko Nay Aye မူးယစ်ဆေးဝါးများသုံးစွဲကြသလားဗျ..?ကြားရတာဆေးကြောင်ပြီးလုပ်ချင်ရာလုပ်နေသလိုပဲ...
November 9, 2012 at 11:23pm · Edited · Like · 1
Mig Yan Sis..do u have photo of Myo Win?
November 10, 2012 at 12:02am · Like
Phyo Mg Mg Win အဲဒီ မျိုးဝင်း သံချောင်းဆိုတဲ့အကောင်
November 10, 2012 at 12:17am via mobile · Like · 1
မိုး စဲ အဲ့ဒီလုပ်ရပ်တွေကို လုပ်တဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ သူတွေဟာ ခု ချိန်ထိ အေဘီအက်ဒီအက်ဖ် (မပ)မှာ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း တာဝန်ကို ယူထားဆဲပါ။ ဘာကြောင့် အရေးယူမှု့တွေ မလုပ်သေးတယ်တော့ မသိပါဘူး..
November 10, 2012 at 12:18am · Like · 5
May Myo Thu ခုလေးတင်ကွာ ကိုယ့်အရှေ့မှာလူတယောက်ကို သတ်ပစ်လိုက်ပြီးတော့ ဒီလူရဲ့ မြေပုံပေါ်ကို လမ်းလျှောက်ခိုင်းတာ။ တော်တော်လေးကို မဟုတ်ဘူး အဲဒီ စိတ်ဓါတ်တွေက။မဟုတ်တော့ဘူး။
November 10, 2012 at 12:25am · Like · 3
Bo Saw Kaung Ma Nge, I would like to tell youalittle bit about U HLwan Moe. Please call me sometime.
November 10, 2012 at 12:28am via mobile · Like · 3
Nang Aung Htwe Kyi နောက်ပိုင်းမှာဓါတ်ပုံတွေ ပါလာမှာပါ ။ တာဝန်ရှိသူတွေ ပုံ တွေ ထဲ့ပေးမှာပါ ။
November 10, 2012 at 12:28am · Like · 5
Nang Aung Htwe Kyi ပြည်တွင်းမှာ တရားရင်ဆိုင်ဖို့ အတွက်ကျန်ရစ်သူမိသားစုက တိုင်ချက်တွေဖွင့် ထားပြီးဖြစ်တယ် ။ SB က အရင်စစ်ဆေးတယ်။ ခု ရဲ ကစီစစ် နေတယ် ။ဒီအခြေ အနေကနေ ဘာလို့ မတက်နိုင်သေးတာလဲ ဆိုတာ နေပြည်တော်မှ တာဝန်ရှိ သူတွေ သာအသိဆုံး ဖြစ်နိုင်မယ် ထင်တယ် ။ ပြည်တွင်းမှာ တရားဥပဒေ စိုးမိုး ရေးတကယ်ရှိ မရှိ အဆုံးအဖြတ် ပေးပါလိမ့်မယ် ။
November 10, 2012 at 12:34am · Like · 14
Nang Aung Htwe Kyi Yes A Ko Bo Saw Kaung >> I will call you asap .
November 10, 2012 at 12:41am · Like · 1
Than Tun Soe ဥိးစီးလွမ်းမိုးကိုသတ်တာApr6ငါ့ကိုဖမ်းတာ မတ် ၂၇
November 10, 2012 at 2:15am via mobile · Like · 3
Nang Aung Htwe Kyi ကျေးဇူး Than Tun Soe >> နင့်ဆီငါ ဖုန်းခေါ်မယ် ။ ဂရုကို လာခဲ့ပါ
November 10, 2012 at 2:19am · Edited · Like · 2
Kyaw Soe Win ဘာပြောရမှန်းကို မသိတော့လောက်အောင် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။
မပ ပြန်တွေ ပြောတဲ့ အကြောင်းအရာတိုင်းဟာ စိတ်ဒါဏ်ရာအကြီးကြီး ဖြစ်စရာတွေချည်းပါပဲ။
November 10, 2012 at 2:35am · Like · 1
Ko Kyaw အင်း... စိတ်မကောင်းစရာပဲဗျာ၊ တကယ်တော့အားလုံးက အချင်းချင်းတွေမလား..။
November 10, 2012 at 2:51am · Like
Sherri Fa ဦးစီးဆိုတာ ရာထူးကို ခေါ်တာလား။ စစ်ဦးစီးလား။
November 10, 2012 at 4:23am · Like
Kyaw Kyaw sons of the bitch (Dr.Naing Aung ,Moe Te Zune and Ronald Aung Naing)
November 10, 2012 at 7:13am · Edited · Like · 1
ဟာဂျူလီ ကသာ ဒီအပါတ်ထွက်တဲ့ လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်မှာ ဖိုးစန်းရေးတဲ့ ဒေါက်တာအောင်နိုင်ကို ပေးစာလေးလည်း အတော်ကောင်းပါတယ်၊မနက်ဖြန် စကင်ဖတ်ပြီး ကျွန်တော့် ဖေ့ဘွတ်မှာ တင်ပေးပါ့မယ်..
November 10, 2012 at 7:11am · Like · 6
Chaw Su Hlaing I am sorry for u all to hear this. My heart goes with those who suffered.i hope the truth will prevail and those who commited the atrocities will be brought to justice...
November 10, 2012 at 8:28am via mobile · Like · 1
Thant Zin Ma Nan, I had been t yr home at yr father's funeral b4 i go abroad n Im not sure whether I met u at school together with Ko Thu Ta
November 10, 2012 at 8:40am via mobile · Like · 1
November 10, 2012 at 9:56am · Like · 4
Rock Rocker အစ်မ ဖြစ်နိုင်ရင်စာအုပ်လေးထုတ်စေချင်ပါတယ်။နောင်လာနောက်သားတွေအတွက်ပေါ့။
November 10, 2012 at 11:08am via mobile · Like · 2
Aung Kyaw Moe လူကြီးကုန်း ဆိုတာကြည့်ပြီး သူတို့လဲစစ်အာဏာရှင်ရူးနေတာပဲလို့ခံစားရပါတယ်။မငယ်တို့က ကံဆိုးချင်တော့အရူးတွေဆီရောက်သွားတာကိုး။တော်တော်ကို လူစိတ်မရှိတဲ့အရူး ၊အရိုင်းအစိုင်းတွေပါ ။ ကျောင်းသားတပ်မတော်မအောင်မြင်ရတာလဲဒီလိုအရူးတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့လဲထင်မိပါတယ်။အခုလွတ်နေသေးတဲ့ အရူးနိုင်အောင်၊အရူးအောင်နိုင်တို့ကိုလဲအမြန်ဆုံးတရားဥပဒေနဲ့အညီစီရင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြရမှာပါ ။
November 10, 2012 at 8:01pm · Like · 2
Aung Kyaw Moe အရူး တို့၏ စိတ်ဓါတ် နှင့် လုပ်ရပ် .........
November 10, 2012 at 8:02pm · Like · 5
Nang Aung Htwe Kyi ပြည်တွင်းရဲ့ တရားစီရင်ရေးအခြေအနေတွေ မူမမှန်သေးဘူး။ အသိအသာ မြင်နေရတယ် ။ မပ အမှု့ တွေ ခွင့်ပြုရင် အစိုးရက သူတို့ဘက်ပြန်လှည့်လာမှာ ကို စိုးရိမ်နေတာ 99% ဖြစ်နေပုံဘဲ .။ပြည်တွင်း မှာတော်တော် ခက်ခဲနေတယ် ။ ပြည်ပကနေတော့ .. ငွေ ငွေ
November 10, 2012 at 8:14pm · Like · 4
Thant Zin Agree with Ma Nan, Recent Govt has so many problem n if they accept to open that case they will face 88 n Depeyin problem。 They still have nightmare
November 10, 2012 at 9:19pm via mobile · Like · 1
Moe Lay ညီမငယ်အားလုံးပြောပြီးသွားပြီပေါ့။ အင်း စောင့်ဖတ်လိုက်ပါအုံးမယ်။ ဝမ်းနည်းစရာပါ။
November 11, 2012 at 7:57am · Like · 1
Aung Kyaw San မျိုးဝင်းနဲ့ သံချောင်း ပုံ (ပုံကြီးနဲ့ တင်ထားပါ)
November 15, 2012 at 7:51am · Like · 1
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 8:19 PM